Guusha beri Madaxweyne Xasan mise Ra’iisul Wasaare C/weli? - iftineducation.com
Guusha beri Madaxweyne Xasan mise Ra’iisul Wasaare C/weli?
iftineducation.com – Hoteelada Muqdisho iyo Xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka socda diyaar garow xoog leh iyo shirar la isugu diyaarinayo kulanka beri ee Baarlamaanka u ballansan yahay inuu codka kalsoonida u qaado Ra’iisul Wasaaraha iyo xukuumadda.
Olole balaaran oo ay wadaan xildhibaanada iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa magaalada, waxaana dhinac walba uu maanta soo bandhigayaa awoodooda iyo dhoolutus ay ku muujinayaan codkooda, iyadoo shirarkan ay yihiin kuwii ugu danbeeyay ee xildhibaanada lagu kala jiidanayay.
Kulanka beri ee baarlamaanka ayaa qeybtiisa hore wuxuu noqon doonaa in lasii dhameystiro dhageysiga dooda oo xildhibaanada qaarkood shalay qoraxda ku dhacday, kulankaasi shalayna uu ahaa midkii ugu howl ballaarnaa ee baarlamaanka uu qabto mudooyinkan.
khilaaf-madaxMadaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa si toos ah xildhibaanada u sameynaya balan qaadyo iyo xilal, sidoo kale ay jiraan warar sheegaya in dhaqaale uu barbar socdo balan qaadyadaasi.
Xildhibaan Bishaar Ugaas oo ka mid ah mudanayaasha taageersan Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inay maanta ku leeyihiin magaalada Muqdisho dhoolatus siyaasadeed oo ay isugu diyaarinayaan kulanka berri, isagoo rajo ka muujiyay in guusha dhinacooda ay raaci doonto.
Lama oga, lamana saadaalin karo, guusha cida hanan doonta, hase ahaatee waxaa shalay laga dareemay doodii baarlamaanka in tirada is qortay oo aheyd 191 xildhibaan in 138 ka tirsan inay ahaayeen kuwa soo gudbiyay mooshinka. Waxaase la ogaan doonaa beri.
Baydhabo: Waariyeyaal & dad kale oo ku dhintay Qaraxyo ismiidamin